Kantu Semalt: The Ultimate Visual Web Scraping Tool
Na miasa amin'ny famoahana angon-drakitra ara-bola na lisitra vidin'ny tranokala e-commerce ianao coding, Kantu no safidy tsara indrindra ho anao! Ho an'ireo mpankafy miondrika, ny fitrandrahana ny tranonkala dia dingana amin'ny fahazoana fampahalalana sarobidy avy amin'ny tranokala ary manangona azy ao anaty tabilao sy tahiry.
Ahoana no fiasan'ny Kantu Editor?
Kantu dia manala haingana ny angona avy amin'ny tranonkala tsy mila anao hanana fahalalana fandaharanasa. Miaraka amin'i Kantu, ny fandefasana votoaty amin'ny tranonkalan'ny fanamafisana sy fananganana tahirin-kevitra dia tsy asa goavana. Ity tranonkalan'ny tranonkala dia malaza amin'ny famoahana lahatsoratra avy amin'ny Portable Document Format (PDF) sy ny horonan-tsary.
Ny tahirin-kevitra voatanisa dia matetika voavonjy amin'ny endriky ny CSV rakitra na voasoratra ao amin'ny tahiry avy amin'ny Kantu's Application Programming Interface (API). Kantu dia ahafahan'ny mpivarotra mamantatra sy manasongadina ny angon-drakitra hosodoko. Ny fampiasana an'io tranonkala io dia tsotra. Mba hanakarana ny angona avy amin'ny tranokalan'ny fampiasana mpanao mozika Kantu, dia nanamboatra sary marika mavokely hanamarihana ireo angona voatahiry.
Kantu Editor dia mampiasa ny mari-pamantarana mari-pototra (OCR) mba hanangona fanazavana avy amin'ny loharano HTML anao. Ny OCR dia lohahevitra avo lenta izay manasatra ny famoahana ireo rakitra PDF, video, ary sary avo lenta.
Fa maninona no misafidy Kantu Editor?
Ny Kantu Editor dia iray amin'ireo fitaovana avo lenta ampiasaina amin'ny fanalana ny tranokala. Ity mpanoratra ity dia ampiasaina amin'ny tanjona samihafa. Ireto ny antony lehibe tokony handinihanao an'i Kantu amin'ny tetikasan-tranonkalanao manaraka.
Kantu Editor dia misy endri-panoratana toy ny programa, scripts ary macros. Miaraka amin'i Kantu, azonao atao ny manakona ny angona avy amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fampifanaranao ireo endri-javatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy ny fepetra.
Tsy voatery hianatra ny fomba fiasa amin'io fiteny io ianao na io programming io satria ny fitaovana ampiasaina amin'ny fiteny rehetra.
Built-in PDF and OCR Features
Mba ho fampahalalana anao, ny Kantu Editor no hany fitaovana OCR features. Miaraka amin'i Kantu, ny fitrandrahana angona avy amin'ny horonan-tsary sy PDF dia toy ny milalao lalao video.
Fomba fampiasana Kantu
Fanaraha-maso ny mari-pamantarana - Kantu web scraping fitaovana dia ampiasaina hanaraha-maso ny fivoaran'ny portals e-business. Raha manana tranokala an-tserasera ianao, dia ahafahanao mamakafaka ny baikon-tsakafo sy ny antsipirihan'ny fampiharana ny Kantu;
Jereo sy diniho ny vidin'ireo vokatra isan-karazany;
Fanavaozana ny rafitra miaraka amin'ny tahan'ny fifanakalozana;
Mametraka sy manangona tahirin-kevitra anaty tahiry;
Famerenana fampahalalana mahasoa amin'ny fampiasana OCR;
Mitadiava ny fifaninanana fifaninanana;
Kantu dia tranonkala iray maimaimpoana maimaim-poana izay manala ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala iray ary manangona azy ao anaty tabilao sy CSV rakitra. Raha ny tetikasa goavinao manaraka dia mifamatotra amin'ny fametahana ireo antontan-taratasy sy horonan-tsarin'ny PDF, dia ilaina ny hodinihina amin'ny tranokala Kantu Source .